Masuulkii Al-Shabaab u qaabilsanaa Muqdisho oo lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka ay qaadeen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMasuulkii Al-Shabaab u qaabilsanaa Muqdisho oo lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka ay qaadeen
July 31, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaan “Cali Jabal”. [Xigashada Sawirka: Twitter/hamzaafrica]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Masuulkii maleeshiyada Al-Shabaab u qabilsanaa magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka ay qaadeen, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Duqaynta ayaa ka dhacday meel u dhow deegaanka Tooratoorow Sabtidii, waxaana lagu bartilmaameedsaday Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaan (Cali Jabal) oo Al-Shabaab masuul uga ahaa Muqdisho, sida ay bayaan ku sheegtay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Bayaanka ayaa Wasaaradda Warfaafinta ku sheegtay in Cali Jabal uu masuul ka ahaa qorshaynta qaraxyo badan iyo dilal khaarajin ah oo ka dhacay gudaha Muqdisho.
Maleeshiyada Al-Shabaab weli kama aysan hadlin dilka la sheegay in loo geystay Cali Jabal.
Madaxweynaha Puntland oo kala diray golihii deegaanka degmada Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kala diray golihii deegaanka ee degmada Garoowe maanta oo Khamiis ah, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha. “Markay cadaatay inay hanan waayeen shaqadii loo igmaday [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xoghayihii hore ee joogtada ahaa ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahim ayaa xafiiska ku wareejiyay xoghayaha cusub Cabdullaahi Maxamed Xasan. Yaxye ayaa dukumentiyada xafiiska ku wareejiyay ninka badali doona ee Cabdullaahi [...]